Nasehon’Ireo Atleta Mpitsoa-Ponenana Fa manan-Javatra Maro Omena Ry zareo Na Teo Aza Ny Tantara Mampalahelo Nodiaviny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2016 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Italiano, Ελληνικά, Français
pikantsary tamin'ny fahatongavan'ireo atleta mpitsoaponenana nandritra ny lanonam-panokafan'ny lalao olaimpika
Nifarana ny lalao olaimpika Rio 2016 ary tonga ny fotoanan'ny tombana ijerena ny zavabita. Tsy mbola nitranga tao amin'ny kianja hafa ary tsy misy idiran'ny hakingana ara-batana ny sary iray mety hiraikitra ao amin'ny fahatsiarovana mandritra ny fotoana maharitra. Sary an-drindrina manome voninahitra ireo atletan'ny ekipan'ny mpitsoa-ponenena ao an-dalamben'i Rio izany:
Sary tsara dia tsara ! Manome voninahitra ny ekipan'ny mpitsoa-ponenana ny zavakanto an-dalambe ao Rio
Samy manana ny tantarany miavaka ireo mpanao fanatanjahantena ireo, fanamby sarotra anihana hahatongavana hatrany Rio. Izany lalana nodiavina izany no sariohatry ny tarigetra olaimpika, soatoavina izay matetika voahosihosy noho ny raharahan-kolikoly sy fifandroritana.
Nahavita nanome rivo-baovao amin'ny fifaninanana iray nisetra ady sarotra noho ny fahatarana teo amin'ny fananganana sy ny fihetsiketsehana maro izay niteraka fisalasalana teo amin'ny mponina an-tanandehibe indray ny fisian'ny ekipan'ny mpialokaloka. Nitsangana nitehaka mihitsy ny mpanatrika tamin'ny fotoana nidiran'ity ekipa “avy lavitra” ity ary niroboka tanteraka tao amin'ity olaimpiady ity. Tsy isalasalana fa izany no antony mahatonga ity ekipa ity ho saimbolin'ny lalao olaimpika 2016:
Ekipa Olaimpikan'ny mpitsoaponenana Rio 2016
“fanaintainana manomboka ho lefy”
Yolande Mabika dia avy any Bukavu ao Atsinanan'i Congo. Judoka tahaka an'i Popole Misenga mpiray tanindrazana aminy i Yolande. Nanafika ny tanàna kely nisy azy ny mpioko raha valo taona izy ary tsy nahita ny fianakaviany intsony izy nanomboka io mason'andro io. Voaray ho ao amin'ny akany iray ho an'ny kamboty tao Kinshasa i Yolande. Rehefa leon'ny fanitsakitsahana miverimberina nataon'ny federasion kongoley izy dia nangataka fialokalofana ho ao Brezila. Nitantara ny fiainany sy ny fanantenany aorian'ny Lalao Olaimpika izy:
“Manantena aho fa hanampy ahy hahita ny fianakaviako ny lalao olaimpika” Ao amin'ny gazetiboky Stylist ny sombin-tantarako momba ilay atleta mpitsoa-ponenana Yolande Mabika
Mbola mieritreritra an'i Congo ihany aho, fa mihalefy izany – efa lasa momba ny lasa izany ho ahy ary tsy mieritreritra ny fianakaviako mandritra ny andro intsony aho. Eo ny fahatsiarovana fa lasa ny fanaintainana. Manaiky ny mety tsy hahitako ny fianakaviako intsony aho. Brezila indray no tanindrazako ankehitriny ary te-hijanona eto aho hanangana fiainam-baovao … Te-hiasa ho an'ny tanoravavy izay tsy nanam-bintana toa ahy aho ahafahako manampy azy hihoatra ny olana nodiaviko ary tsy hijanona mihitsy aho. Mahafantatra ankehitriny izao tontolo izao fa atleta olaimpika aho ary hitohy hanazatra tena aho mba hihamafimafy kokoa amin'ny ady atao amin'ny fifaninanana rehetra.
“Na oviana na oviana, aza kivy mihitsy”
Sarin'ny anio, ny Malagasy Estellah Fils sy mpialokaloka Syriana Yusra #Mardini samy mpilomano taorian'ny lomano 100m
Yusra Mardini dia teraka tamin'ny 5 mars 1998 tao Damaskosy ao Syria. Efa fantatra ny tantarany fa mbola mendrika ny hotantaraina hatrany. Tamin'ny 2015 izy nandositra ny ady tao Syria niaraka tamin'ny rahavaviny Sarah, zokiny roa taona, nandalo an'i Beirota, Istanbul ary Izmir, alohan'ny nandraisany botry ho ao Lesbos. Maty antenatenan-dalana ny botry tokony hitondra azy ho ao amin'io nosy io, izy mirahavavy niampy vehivavy iray hafa no hany nahay nilomano tamin'ireo olona 18 tao anaty botry, ry zareo no nirotsaka an-drano ary nanomboka nanosika sy nisintona ny botry nandritra ny adiny telo hahatongavana amin'ny morondrano.
Nandresy izy tamin'ny isan'andiany 100 m tamin'ny Lalao Olaimpika saingy tsy ampy hiakarany amin'ny manasa-dalana ny fotoana vitany. Niavaka tamin'ny fikirizany tsy nisy lesoka i Yusra araka izay efa nataony tamin'ny nitarihany ny botry nandritra ny ora maro mandra-pahatonga any amin'ny toerana itodiany. Nanazava izany herintsaina tsy dia ananan'ny hafa loatra izany ny mpanazatra azy:
Tena mifantoka tsara i Yusra. Manana tanjona izy ary manomana ny fiainany rehetra ho amin'izany. Izany no mahatonga ilay zatovovavy manazatra tena roa na telo ora isa-maraina alohan'ny hianarana ary miverina manao toy izany indray izy ny folakandro.
Araka izay vao nohamafisin'i Yusra. Tsy miandry tolora-potsiny izy ary tsy hamela na inona na inona hanakana ny firosoany:
Tiako ny olon-drehetra hilofo hanatratra ny tanjona napetrany satria raha mifantoka amin'izany, dia afa-manao izay rehetra azo atao hahatongavana amin'izany, ary mihevitra aho fa na dia tsy hahomby aza aho dia mbola hamerina hanandrana hatrany. Angamba mety halahelo aho, fa tsy ho asehoko izany fa hanandrana hatrany hatrany aho mandra-pahatongako amin'izany. Tiako aseho amin'ny rehetra fa raha sarotra ny manatanteraka ny nofinofiny, dia tsy hoe tsy azo tanterahina izany.
Afa-mirehareha amin'ny zava-bitan'ny atletany tao Rio ny tobin'ny mpialokaloka ao Kakuma
Izany fikirizana te-ho tafavoaka izany no naroson'i Thomas Bach, filohan'ny Komity Olaimpika raha nanazava ny fironan'ny rehetra ho amin'ity ekipa ity izay nahavita nihoatra ny fitiavan-tanindrazan'ny mpanohana nandritra ny Lalao:
Antso ho an'ny fiarahamonina iraisampirenena ihany koa izany hilazana fa olombelona namantsika ny mpitsoa-ponenana ary loharanon-karena ho an'ny fiaraha-monina. Nasehon'ireto mpitsoa-ponenana atleta ireto amin'izao tontolo izao ny voina tsy voavisavisa natrehin'izy ireo, afa-manabe voho ny fiaraha-monina amin'ny talentany, ny hakingany ary ny fikirizana ao aminy ny rehetra.
Nanamafy i Tegla Loroupe, Kenyana mpihazakazaka ary ray mpiahy ity ekipa ity fa misy ihany koa ny kasinga manambatra niainga avy amin'ity ekipa ity:
Fitaratra arahan'ny mahantra eto amin'izao tontolo izao ry zareo, fa tsy ho an'ny mpitsoa-ponenana ihany. Izany no antony hitehafan'ny olona azy fatratra. Izany fikirizana manoloana ny fanamby goavana izany. Tiako tahaka ny zanako naterako ny atletan'ity ekipa ity.